40 Salaadiinta Xifdinta Xoogsatada | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 40 Salaadiinta Xifdinta Xoogsatada
Sabuurradii 118: 1-29:
Rabbiga ku mahad naqa, Rabbiga ku mahad naqa, waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa. Haddaba reer binu Israa'iil ha yidhaahdeen, Naxariistiisu weligeedba way waartaa. 1 Oo reerka Haaruun hadda ha yidhaahdeen, Naxariistiisu weligeedba way waartaa. 2 Oo kuwa Rabbiga ka cabsadaa hadda ha yidhaahdeen, Naxariistiisu weligeedba way waartaa. Anigoo cidhiidhi ku jira ayaan Rabbiga u qayshaday, Markaasaa Rabbigu ii jawaabay, oo wuxuu i taagay meel ballaadhan. 3 Rabbigu waa ila jiraa, Oo xagga Rabbiga ayaan ku ammaanayaa. Ma cabsan doono; Bal maxaa dad igu samayn karaa? 4 Rabbigu waa ila jiraa, oo wuxuu ku dhex jiraa kuwa i caawinaya, Haddaba waxaan kuwa i neceb ku arki doonaa waxaan doonayo. Intii dad lagu kalsoonaan lahaa Waxaa ka wanaagsan in Rabbiga laysku halleeyo. Intii amiirro lagu kalsoonaan lahaa Waxaa ka wanaagsan in Rabbiga laysku halleeyo. 5 Quruumihii oo dhammu way i wada hareereeyeen, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. 6 Way i hareereeyeen, Way i hareereeyeen, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. Waxay ii hareereeyeen sida shinni oo kale, Waxay u burburiyeen sidii qodxanta dabka oo kale, Oo anna magaca Rabbiga ayaan ku baabbi'in doonaa. Adigu aad baad igu mudday si aan u dhaco aawadeed, Laakiinse Rabbigaa i caawiyey. Rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga, Oo wuxuu ii noqday badbaadadayda. Kuwa xaq ah teendhooyinkooda waxaa ku jira codkii rayraynta iyo badbaadada, Gacanta midig oo Rabbiguna wax xoog leh bay samaysaa. 7 Gacanta midig oo Rabbiga waa la sarraysiiyey, Gacanta midig oo Rabbiguna wax xoog leh bay samaysaa. Anigu ma dhiman doono, laakiinse waan noolaan doonaa, Oo waxaan sheegi doonaa shuqullada Rabbiga. 8 Rabbigu aad buu ii edbiyey, Laakiinse dhimasho iima uu dhiibin. Irdaha xaqnimada iga fura, Oo anna waan geli doonaa, oo Rabbigaan ku mahadnaqi doonaa. 9 Tanu waa iriddii Rabbiga, Oo waxaa geli doona kuwa xaqa ah. Waan kugu mahad naqi doonaa, waayo, waad ii jawaabtay, Oo waxaad ii noqotay badbaadadayda. Dhagaxii kuwa wax dhisaa ay diideen, Kaasu wuxuu noqday madaxa rukunka. 10 Tanu xagga Rabbiga bay ka timid; oo waa wax aad u yaab badan indhahayaga. 11 Tanu waa maalintii Rabbigu sameeyey, Waxaynu ku farxi doonnaa oo ku rayrayn doonnaa. Sayidow, waan ku baryayaaye, haatan na badbaadi, Rabbiyow, waan ku baryayaaye, haatan barwaaqo noo soo dir. 12 Waxaa barakaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya, Waxaannu idinka ammaannay guriga Rabbiga. Rabbigu waa Ilaah, oo wuxuu na siiyey iftiin, Allabariga xadhko ku xidha tan iyo meesha allabariga geesihiisa. Waxaad tahay Ilaahay, oo anna waan kugu mahadnaqi doonaa, Waxaad tahay Ilaahay, oo waan ku sarraysiin doonaa. Rabbiga ku mahad naqa, Rabbiga ku mahad naqa, waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa.
Awood kastoo aad noloshaada ka dhex shaqeysaan maanta waa lagu shaacin doonaa magaca Ciise aamiin. Waxaan u adeegnaa tukashada ka jawaabaysa Ilaah, markasta oo aan u yeerno isaga, Wuxuu marwalba si dhaqso leh noogu jawaabayaa. Maanta waxaan eegi doonaa 40 nin oo xoog leh salaadaha badbaadinta, laakiin inta aynaan u galin tukashada samatabbixinta saxda ah, aan fahanno xoogaa.
Waa kuma nin xoog badan? Ninka xoogga ahi waa wakiilka jinni, ama jinni ka soo horjeedda horumarka qoyska. Bal tan ogow, shaydaanka iyo jinnigiisa ayaa ah cadowgayaga dhabta ah, sidoo kale wuxuu u soo diray jinniyadiisa qoysaska si ay u khalkhal geliyaan. Xooggaga ayaa mas'uul ka ah qaababka xun ee qoysaska. Tusaale ahaan, waxaad arkeysaa arrimaha madhalaysnimada qoysaska qaarkood, min jiil ilaa kan kale, Ibraahim buugga dhexdiisa wuxuu ku lahaa arrimo la xiriira dhalidda, waxay qaadatay sannado kahor intaysan ilmuhu dhalan, Bilowgii 12: 15-17, Isxaaq sidoo kale wuxuu lahaa arrimo isagoo dhalmo leh, waxay qaadatay sannado inuu ku bilaabo dhalashada, Bilowgii 25: 19-34, waxaan sidoo kale ku aragnaa isla Yacquub iyo afadiisii ​​Lee'ah iyo Raaxeel, Raaxeel sidoo kale waxay la kulantay madhalays Bilowgii 30: 1. Qaabka xun ee noocan ahi wuxuu ka yimaadaa ragga xoogga leh, qoysaska qaarkood saboolnimadooda, qaar baa guurka dib u dhiga, qaarna dhimashadiisa aan la hubin, qofna kuma noola ilaa da 'gaar ah. Laakiin wanaaggu waa tan, sida aan u guda galayno salaaddaan xoogga badbaadinta ee maanta, nin walba oo xoog ku leh noloshaada ayaa laga adkaanayaa magaca Ciise. Ilaaha dab ku jawaaba wuxuu isu muujin doonaa mid xoog badan noloshaada magaca Ciise. U soo ducee salaadadan si iimaan leh maanta oo filasho wax ka qabad deg deg ah oo kudhaca noloshaada iyo qoyskaaga magaca Ciise.
1. Waxaan ka saaray gacanteyda noloshayda gacmaha iyo ku wareejinta nin kasta oo xoog leh magaca Ciise.
2. Mustaqbalkayga waxaan ka saarayaa saameynta iyo xakamaynta nin kasta oo xoog leh magaca Ciise.
3. Waxaan naftayda ka badbaadiyaa addoonsiga shaydaanka miyir-qabka ah ee hadda !!!, magaca Ciise.
4. Awood kastoo jinni kasta oo xakameeya noloshayda iyo mustaqbalkayga, magaca Ciise ha baabiiyo.
5. Farxadda cadaawayaashayda noloshayda ha u ekaato murugo, magaca Ciise.
6. Ururka ciidammada cadaabta ha u dego noloshayda iyo mustaqbalkayga, magaca Ciise.
7. Dhamaan saaxiriinta iyo saaxiriinta rajaynaya dhimashadayda, ha bilaabaan inay hada dhagxaanta dabka helaan, magaca Ciise.
8. Waxaan ka jaray wax dhibaato ah oo xiriir la leh waalidkey, magaca Ciise.
9. Intaan ku turunturoodo harqoodka jinni oo addoonsiga oo dhan, magaca Ciise.
10. Noo daa dabeecad kasta oo guuldaraysata ee noloshayda ha tag oo ha u daayo dabeecadda guusha inay ii timaado, magaca Ciise.
11. Waxaan ku caayaa ninka xoogga badan ee sheydaan u wakiishay noloshayda, magaca Ciise.
12. Farxadda kuwa sharka leh noloshayda ha u rogto murugo weligeed ah, oo ku jirta magaca Ciise.
13. Waxaan ka madax banaanahay addoonsiga jinniyo ee ay leeyihiin magaca Ciise.
14. Geedka reerka xun ee noloshayda ku dhex jira, lagu ruxruxo, magaca weyn ee Rabbigeenna Ciise.
15. Curad kasta oo cudurro ah oo laga dhaxlo noloshayda ha ku burburo noloshayda, magaca Ciise.
16. Waxaan cadeynayaa in xoog waligii cadawgu igu khaldo, waxaan sii deynayaa xukunka rabiga ah ee xerada cadowga sida lagu qoray Sabuurka 35.
17. Dulmanayaashayda oo dhammu ha ku hoos dhacaan taladooda, magacayga Ciise.
18. Barakooyinkayga oo dhan oo ku jira gacanta cadaawayaashayda ha loo sii daayo, magaca Ciise.
19. Ha u joojiso oraah kasta oo xun oo noloshayda lagaga hadlo, magaca Ciise.
20. Dhibaato kasta oo ku lifaaqan magacayga, waa laga noqday, magaca Ciise.
21. Sayidow, ii muuji sirta noloshayda oo dhan ee aan u baahan yahay inaan ku ogaado magaca Ciise.
22. Iska ilaali shar kasta oo fog iyo satalaytka ruuxiga ah ee aniga iga gees ah, ha aqbalaan dabka onkod Eebbe oo ha lagu gubo dambas, magaca Ciise.
23. Waxaan amar ku bixinayaa in cod kasta oo qalaad oo xun oo magacayga ku yeedhi lagu aamuso magaca Ciise.
24. Sayidow, iga nadiifi sunta ruuxiga ah iyo tan jir ahaaneed ee aan ku cunay, magaca Ciise.
25. Sayidow, dhiigga Ciise ha iska fogeeyo astaamaha kuwa saaxirka ah, iyo saaxiriinta iyo kuwa sharka leh noloshayda, magaca Ciise.
26. Waan ka soo horjeedaa halabuur kasta oo noloshayda baabbi'iyaana waxaa ku jiri doona qayb, magaca Ciise.
27. Waxaan ka soo horjeedaa aqoon darida xaga noloshayda, magaca Ciise.
28. Waxaan kasoo horjeedaa ruuxa masayrka iyo ruuxa noloshayda noloshayda, magaca Ciise.
29. Waan ka soo horjeedaa ruuxa ku guuldareysta inuu ka shaqeeyo jacayl nolosheyda, magaca Ciise.
30. Waxaan ugu yeerayaa dabka, onkodka, onkodka, hillaaca iyo duufaanka kuwa indha indheeya sharka horumarka noloshayda, magaca Ciise.
31. Cunto kasta oo jirkayga ku jirta oo aan si fiican u shaqeyneyn ha aqbalo taabashada rabiga oo ha bilaabo inuu si wanaagsan u shaqeeyo, magaca Ciise.
32. Dhibaato kasta oo ku lifaaqan magacayga waa la baabi'in doonaa, magaca Ciise.
33. Daaqad ha qarsato ninkeyga xoogga badan ee burburka leh ha la kala jeexjeexay, ha la daayo oo ha lagu joojiyo magaca Ciise.
34. Guulihii aan gaadhay, si xoog leh ayaan hadda ugu muuqdaa magaca Ciise.
35. Dhamaan jidadka loo maro guusha ha laga furo, magaca Ciise.
36. Nimco ha i saarnaato noloshayda oo dhan ilaa maanta, magaca Ciise.
37. Noloshayda waan ka jebiyaa nolosha harqoodka, magaca Ciise.
38. Subkidda waxyaalaha aan wanaagsanayn ee ducadu ha igu soo dejiso, magaca Ciise.
39. Sayidow, maanta waxaan helaa furayaasha furayaasha dhammaan irdaha barakeyga, magaca Ciise.
40. Awoodda aan ku kala garto kooxaha xunxun hadda ha igu soo dhaco magaca Ciise.
Aabe, waad ku mahadsantahay maqashay salaadadayda magaca ciise.
nin xoog leh
article Previous20 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Weerarka ruuxiga ah
Salaada Dagaal Oo Ka Soo Horjeeda Weerarada Kaniisadda
Akhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 26ka Oktoobar 2018